आरोप प्रत्यारोपको राजनीति : कुष्ठामात्रै पोख्ने कि देश र जनताको बारे सोच्ने ? – Mission Khabar
आरोप प्रत्यारोपको राजनीति : कुष्ठामात्रै पोख्ने कि देश र जनताको बारे सोच्ने ?
मिसन खबर १५ पुष २०७७, बुधबार १८:०२
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रका शिर्ष नेताहरुबीचको स्वार्थ मिलेको भए यतिबेला देशको राजनीति शान्त हुन्थ्यो होला । सायदै, जनताले अब देश कता जाला, के होला भनेर सोच्नुपर्ने समय आउथेन । तर भैदियो अर्कै । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी र शिर्ष नेताहरुबाट घेराबन्दीमा पारिएको भन्दै संसद विघटन गरिदिए । राष्ट्रपतिले पदिय जिम्मेवारीका हिसाबले दलहरुबीच र कानुनबिदसँग परामर्श गरेर निर्णय लिनुपर्नेमा हतारहतार गर्दै प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अनुमोदन गरिन ।
यो हतारोले निर्वाचन मार्फत ताजा जनादेशमा जाने भन्दै गरिएको घोषणा केबल बाहाना मात्रै हो भन्ने अड्कलबाजी राजनीतिक बृत्तमा गरिदैछ । हुन त, प्रधानमन्त्री ओलीले असम्बैधानिक कदम चालेको भन्दै दिनहुँ प्रदर्शनहरु भैरहेका छन् । अनि दुई टुक्रा भएको सत्तारुढ दल नेकपाले फुटको औपचारिक घोषणा नै नगरि समानान्तर गतिबिधिलाई तिब्रता दिएका छन् । पार्टीका आफू निकट केन्द्रिय समिति, स्थायी समिति, सचिवालय सदस्यको बैठक राखेर नेकपाका अध्यक्ष द्धय तथा शिर्ष नेताहरु एकअर्का बिरुद्ध आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली सिंगो नेकपाको नेता बन्न छाडेर गुट चलाउन सक्रिय बन्दा, तात्कालिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल लगायतका थुप्रै नेतालाई आफ्नो गुटमा पार्न सफल भएका छन् । यसलाई कतिपयले बाहिर बसेर एमाले फुटाउन नसकेका प्रचण्डले नेकपाभित्र छिरेर एमाले फुटाएको रुपमा अथ्र्याएका छन् ।
ओली अहिलेको अवस्थाको सबै दोष प्रचण्डमाथी थोपरेर आफूलाई देश र जनताको नायक भएको जसरी उभ्याउन खोज्दैछन भने प्रचण्ड–नेपाल पक्ष उनै ओलीलाई खलनायकका रुपमा चित्रण गरिरहेको छ । देशमा सम्बैधानिक संकट उत्पन्न भएको चिन्ता र निकास कसरी खोज्ने भन्दा एकअर्का बिरुद्धको मनमुटाव पोख्ने थलो बनेका छन्, नेकपाका दुई गुटका भेला, बैठक लगायतका फोरमहरु । बालुवाटारको आफू निकट केन्द्रिय समिति बैठकमा मात्रै होइन, नेता तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा जहाँ पुग्दा पनि नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड माधव नेपाल समूह पद र अवशरको लोभी भएका कारण सरकारले काम गर्न नसकेको चौतर्फी घेराबन्दीबाट देश र जनतालाई निकास दिन नै संसद विघटनको बाटो रोजेको दाबी दोहोर्याइरहेका छन् ।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि के कम, संसद विघटन मात्रै होइन नेकपाको फुट र स्थायी सरकार विकास र समृद्धीको जनचाहना पुरा नहुनुमा ओली बाधक भएको आरोप लगाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली नियोजित षड्यन्त्रको मतियार बनेको दाबी गर्ने प्रचण्ड पार्टी बैठक, समुहिक निर्णय पद्धती सबै भत्काएर ओलीले एकलकाटे गतिबिधि गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यति मात्रै होइन्, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले त पुस ५ गते बिहान साँढे ५ बजे प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने योजना बनाएको जानकारी पाएको र यो असंबैधानिक कदम रोक्न सहमतिको सहज दुई विकल्पसहित साँढे ११ बजे अध्यक्ष द्धय बसेर निकासको अन्तिम प्रयास गर्ने सहमति लत्याएर ओलीले हतारहतार संसद विघटनको बाटो रोझेको आरोप लगाइरहेका छन् । विगत एक वर्षदेखी नै ओली नियोजित षड्यन्त्रको मतियार बन्ने खेलमा लागेको आरोप प्रचण्डले लगाएका छन् । प्रचण्डले अन्तिम समयसम्म ओलीलाई धक्का दिने र अबको ओली राजनीति जनताको बलमा समाप्त पार्ने उद्घोष गरिरहेका छन् ।
संसद विघटनले नेकपाका शिर्ष नेतहरुको असली रुप सतहमा ल्याईदिएको छ । एकअर्काको आलोचना र बिरोधकै लागि नेताहरुले राजनीति गरेको जस्तो देखिएको छ । हुन त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भित्र पनि नेताहरुको उस्तै स्वार्थगत आकांक्षा छ । जसपा, राप्रपा पनि के कम एकअर्कालाई नेता स्विकार्न तयार नहुँदा भागबण्डामै पार्टीको एकिकृत रुप देख्न पाइएको छ । भाडबण्डा र पद मिल्दा सब ठिक शिर्ष नेताहरुको चित्त नबुझ्दा देश र जनता नै समस्याको सामना गर्न बाध्य हुनुपर्ने फोहोरी राजनीतिक संस्कार अब सच्याउन आवश्यक छ । नेकपाभित्रको किचलो र सडकमा पोखीएको आरोप प्रत्यारोप राजनीतिकर्मीका लागि सिकाईको अभ्यास बनोस् ।।